Ny fitaovana fananganana beton, noho ny fananany miavaka dia ampiasaina betsaka hamoronana singa fananganana. Tsy maintsy araraka ao anaty lasitra natao manokana izy io, izay antsoina hoe formwork na fikatonam-baravarana. Ny formwork dia mitazona ny beton narotsaka amin'ny endriny mandra-pahatonga azy hihamafy sy hahatratra tanjaka ampy hanohanana ...
Ny fampiasana hazo be dia be amin'ny fanamboarana an-tanàn-dehibe dia nahatonga ny fandringanana ala be loatra, fandotoana mavesatra ny fako, ary fanimbana lehibe ny tontolo iainana. Ny famariam-bahoaka sy ny fampiharana ny rafitry ny bobongolo aluminium dia mahatonga ny fananganana trano ho tsara kokoa, haingana kokoa ary ara-toekarena kokoa, ...
Ny fampitaovana scaffolding mifamatotra dia karazana haitao scaffold vaovao namboarina haingana tamin'ny fiandohan'ity taonjato ity, izay misy akony lehibe amin'ny fivoaran'ny teknolojia fananganana eto amin'ny fireneko. Izy io dia mamadika ny asa any amin'ny toerana avo ho lasa asa ambany, ary manova ny fampiatoana ...
Fizaran-tsarimihetsika Ringlock, Scaffold Ringlock adidy mavesatra, Jack screw azo ovaina, Kwikstage Fitaovana fikolokoloana, Sifotra amin'ny fantsom-by vy, Fehikibo Scaffolding Ringlock,